Taliyaha Ciidanka Jabuuti Oo B.weyne Garay B.bartena Booqday Maanta+Sawirro – Radio Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Jabuuti Oo B.weyne Garay B.bartena Booqday Maanta+Sawirro
Taliyaha Guud ee Ciidammada Xoogga dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Baladweyn ee Xarunta gobolka Hiiraan, isagoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen Mas’uuliyiinta Maamulka gobolka Saraakiisha ciidammada Dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ciidammada Amisom.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax ayaa ka mahad celiyay socdaalka taliyaha ciidammada Jabuuti ee Baladweyn isagoo sheegay in nabad galyada gobolka ay waxbadan ka badali doonto soo kordhinta ciidammada jabuuti ee gobolkaas ku sugan.
Taliyaha guud ee ciidammada Xoogga dalka Jabuuti Jen Sakariye Sheekh Ibraahim oo ay wehliyaan saraakiisha ciidammada Boliiska iyo taliyaha cusub ee ciidanka jabuuti gobolka hiiraan ayaa sheegay in socdaalkiisa Baladweyne uu yahay wada shaqayn dhexmarta ciidammada Dowladaha Itoobiya Jabuuti, Soomaaliya iyo sida ay u Howlgalaan ciidammadaas iskaashanaya.
”Waxaa maanta socda ciidankii labaad ee hiilwalaal ee jabuuti inta kale todobaadkaan ayay imaan doonaan ujeedadu waxa ay tahay in ciidankii horay ee halkaan joogay ay wada shaqeeyaan si looga kudbo xaaladda hadda ay joogaan” ayuu yiri Taliyaha Guud ee Ciimamada jabuuti.
Sidookale taliyaha ayaa kormeeray ciidammada kusugan Magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiran iyo sida ay u shaqeeyaan isagoo ka mahadceliyay taliyaha qaabka ay u wada shaqeeyaan ciidammada.
Gobokla Hiiraan waxaa kusugan ciidammo ka socda dalalka Jabuuti itoobiya iyo ciidamada xoogga dalka kuwaas oo iska kaashanaya in bulshada halkaas kunool laga saaro cadowga argagixisada Alshabaab oo deegaanno badan laga saaray
Xabiib Axmed Cali Waa Saxafi Waana Cayaryahan+Sawirro.
Kulanki golaha wasiirrada ee maanta oo looga hadlay ammaanka dalka